Kuseziveki, iinkcukacha ziye zavuza malunga neefowuni ezintsha ebezokuboniswa nguXiaomi ngaphakathi kuluhlu lweMi 8. Ekugqibeleni, namhlanje, nge-19 kaSeptemba, bezisiwe ngokusemthethweni. Eyokuqala kubo yiXiaomi Mi 8 Lite, ekwabizwa ngokuba luHlelo loLutsha. Nangona eli gama ligcinelwe imakethi yase China kuphela.
Ifowuni ivulwe ngokusemthethweni namhlanje. Le Xiaomi Mi 8 Lite yimodeli entsha yoluhlu oluphakathi ukusuka kumenzi waseTshayina. Ukuthozama ngakumbi ngokweenkcukacha, kodwa ngexabiso eliphantsi kakhulu, ke yonke into inempumelelo kwintengiso.
Ngokuphathelele kuyilo, uphawu lulandela imigaqo esiyibonileyo kwezinye iimodeli kuluhlu lwayo. Uyilo oluvuzayo amatyeli aliqela kwezi veki zidlulileyo, ke ayothusi inxenye. Yile nto sinokuyilindela kule modeli intsha ivela kumenzi waseTshayina.
1 Ukucaciswa kweXiaomi Mi 8 Lite
Ukucaciswa kweXiaomi Mi 8 Lite
Ifowuni yeyona ilula siyifumana kolu sapho lweMi 8. Imodeli eyenzelwe abaphulaphuli abancinci, abafuna imodeli yoqoqosho ngakumbi, kodwa bengafuni ukuyeka umgangatho. Ihambelana kakuhle malunga noku, ke unokuyithanda kakhulu. Oku kukucaciswa kweXiaomi Mi 8 Lite:
IsikriniI-6,26 ye-intshi ene-HD epheleleyo + isisombululo kunye ne-19: 9 ratio
Inkqubo: I-Qualcomm Snapdragon 660 octa-core ene-4 x 73 GHz Cortex A2.2 kunye ne-4 x 53 GHz Cortex A1.8
I-RAM: 4GB / 6GB.
Ikhamera esemva: I-12 + 5 MP ene-f / 1.9 kunye ne-Flash ye-LED
Ikhamera yangaphambili: 24 MP
Ibhetri: I-3.350 mAh
Inkqubo yokusebenzaI-Android 8.1 Oreo ene-MIUI
Ukuxhuma: I-4G / LTE, i-SIM ezimbini, iBluetooth 5.0, i-WiFi 802.11a / b / g / n / ac, i-USB Type-C
Ngokubanzi, sinokuchaza oku IXiaomi Mi 8 Lite njengemodeli yezona zigqibeleleyo kuluhlu lwazo. Ifowuni ineprosesa elungileyo, eya kuthi ikunike amandla aneleyo kwemisebenzi eqhelekileyo, nokuba udlala imidlalo kunye nefowuni. Ukongeza, sinesixa esihle se-RAM kunye nokugcinwa, ngokungathandabuzekiyo esiza kuba negalelo ekusebenzeni kwesi sixhobo.
Kufuneka songeze ubukho bekhamera ngasemva kabini, eyinto eqhelekileyo esele iphakathi kuluhlu oluphakathi. IXiaomi ayidanisi, ngakumbi ukuba sicinga ukuba yenye yeempawu ezisebenzisa le khamera yangasemva iphambili kwezona fowuni ziphakathi. Kwakhona ngasemva kwefowuni sifumana inzwa yeminwe. Akukhange kubekho bungozi malunga noku.
Kwakhona, ngokungathandabuzekiyo, ubukrelekrele bokufakelwa buvela kwiikhamera. Enkosi ngayo, iikhamera zale Xiaomi Mi 8 Lite zifumana iindlela ezongezelelweyo zokufota, eziya kuthi zivumele abasebenzisi ukuba bafumane okuninzi kuyo. Phakathi kwezi ndlela zingene kwifowuni yimowudi ye-portrait. Umgangatho weelensi, ngekhamera yangaphambili yakwaSony, inceda kakhulu.
Imibala yinxalenye etsala ingqalelo enkulu kuyilo lwale Xiaomi Mi 8 Lite. Sele kubhengeziwe ukuba inkampani iza kubheja ngeetoni ezonakeleyo, ezinje ngeHuawei P20, kwezi modeli. Kwaye kunjalo. Inguqulelo enethoni epinki kunye nenye enetoni eluhlaza okwesibhakabhaka / emfusa, ngokungathandabuzekiyo eya kuthanda kakhulu.
Okwangoku, ukumiliselwa kwale fowuni kuye kwaqinisekiswa kuphela e-China. Nangona kunokwenzeka ukuba kwiiveki ezimbalwa ukwaziswa kwayo kuya kubhengezwa kwilizwe liphela. Kodwa okwangoku inkampani khange ifune ukuthetha nantoni na malunga noku. Iya kuba yinto engaqhelekanga ukuba ayizukumiliselwa ngaphandle kwe China. Ngokukodwa kuba ifowuni iya kuba negama elahlukileyo ngaphandle kwelizwe, ke ukumiliselwa kucwangcisiwe, kodwa akunamhla.
Kukho iinguqulelo ezininzi zale Xiaomi Mi 8 Lite, ngokuxhomekeke kwi-RAM kunye nokugcinwa kwayo ngaphakathi. Sele sinamaxabiso abo eTshayina:
Inguqulelo ene4 / 64 GB: 1399 yuan (malunga nama-175 eeuros zokutshintsha)
Inguqulelo ene-6/64 GB: 1699 yuan (malunga ne-212 euro ukuyitshintsha)
Imodeli ene-6/128 GB: 1999 yuan (malunga nama-250 eeuros ukutshintsha)
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » IXiaomi Mi 8 Lite: Uluhlu oluphakathi lweXiaomi